Dastuurka Somaliland - Wikipedia
Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda:
Siyaasadda iyo Xukunka
Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo)
Madaxweyne ku xigeenka
Guddoomiyaha: Suleiman Maxamuud Adam
Guddoomiyaha: Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi
Garsoorka ee Somaliland
Liiska Xafiisyada Wakiilka Somaliland
Liiska Ergooyinka Diblomaasiyadeed Somaliland
Dastuurka Somaliland (Af Ingiriis : Constitution of Somaliland; Af carabi: أرض الصومال دستور) waa dastuurka dowliga ah ee Jamhuuriyada Somaliland kaasi oo lagu ansixiyay Golayaasha oo ka mid ah Baarlamaanka Somaliland markey taariikhdu ahayd 30 April 2000. Dastuurka ayaa waxaa la ansixiyey in Somaliland aftida dastuurka qabtay on May 31, 2001 marka 97% ka mid ah codbixiyayaasha ayaa u codeeyay in ay Nicmada. Its version dib-u-soo daabacay ka kooban Hordhaca ah (Arar) iyo shan cutubyada ugu weyn (Qaybo) kuwaasoo mid walba uu yahay sub-qaybsan Qaybo (Xubno). Hadda waxaa jira guud ahaan 130 Articles (Qodobo) marka loo eego hore 156 Articles.
Somaliland ayaa dukumentiyada kale ee dastuuriga ah ee muhiimadda taariikhiga ah oo ka heshiisyada caalamiga ah ee ay beelaha Somaliland kala duwan saxiixday dawladda Britain u dhaxayn, iyo diyaarinta dastuurka kala duwan ka hor xornimada 1960 in Declaration of Dib-u-caddaynta of Xukunka ee 1991 (Burco) oo ka mid ah shirarka horeyn grand oo ka mid ah beelaha Somaliland. Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee June 1960, waxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya. Inta lagu jiro muddada gaaban in dastuurka dhamaystiran ma la ansixiyay. The State of Somaliland lahaa gaar Dastuurka waxaa la qoray horraantii 1960-kii, oo ahaa kooban meel.
Qoraalka waxa ugu horeeya ugu weyn ee Dastuuriga ah ee Somaliland oo madaxbanaan ahaa Axdiga Qaranka (Axdi Qaran), kaas oo lagu saxiixay Shirkii Beelaha Somaliland ee 1993 ee Borama. Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February 1997. Under article 151, dastuurka la fulin doona muddo saddex sannadood ka ansixiyo in February 1997 iyo dhaqan gelin doonaa si buuxda mar afti ayaa lagu qabtay. Waxaa jiray Rizqi muddo this meel gaarka ah in la kordhay labada Gole ee Baarlamaanka, iyo horraantii 2000, labada Gole codeeyay in muddada la kordhiyo by hal sano. Tani ugu horeyn waxay ahayd in la siiyo waqti dheeraad ah, waayo, dhamaystirka dib u eegis dastuurka (ka hor soo gudbinta qaranka ee Aftida a) iyo gelinaya meel xeerarka iyo hababka loogu talo galay beddelidda "wakiil" dimuqraadiyadda ee hadda ka jirta Somaliland si dimuqraadiyad ah oo caan ah oo ku salaysan doorashada tooska ah Madaxweynaha Somaliland iyo Baarlamaanka Somaliland.
Inkasta oo markii hore ay dawladda Somaliland la soo jeediyay si cadaalad ah beddelka ballaaran in dastuurka sanadkii 1999, dastuurka kama dambaysta ah dib loogu ma aha mid ka duwan mid ka mid ah la soo dhaafay iyo hoos u of tirada articles ka 156 si ay u 130 ayaa inta gaari by isku darka ah ee articles qaar ka mid ah, halkii by nasakhayaa ballaaran. Si ka duwan soo jeedinta hore qabyada ah, ee qeybo ka mid ah dastuurka la xidhiidha mabaadi'da dardaaran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu soo ceshan. On oo dhan, dib kor u hagaajinayaa dastuurka oo aan isbeddel asaasi ah ayaa la sameeyey.
Constitution in English
Template:Africa in topic
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dastuurka_Somaliland&oldid=159253"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2016, marka ee eheed 08:24.